Roy Miller - Medical Aid International
Dr Roy Miller dia consultant ao amin’ny Anesthetics and Pain Management monina ao Colchester any Essex.
Tamin’ny taona 2009 dia naka fialan-tsasatra i Roy ary nandeha niaraka tamin’ny fianakaviany hiasa amin’ny hopitaly misiôna kely orthopedic any Blantyre, Malawi. Nandritra io fotoana io, raha nitsidika ny hopitaly tsy dia manana fitaovana firy ao Malawi izy dia nahafantatra ny filàna fanomezana fitaovana tsara kokoa sy ny filana fanatsarana ny fanohanana injenieran’ny biomédical hitandrina sy hanamboatra ireo fitaovana misy. Io no nahatonga azy hirotsaka tamin’ny asan’ny Medical Aid International.
Mipetraka any Colchester izao i Roy miaraka amin’i Janette vadiny ary manan-janaka roa lahy efa lehibe. Ivelan’ny asa dia mankafy mihazakazaka i Roy ary mpikambana mavitrika amin’ny fiangonana eo an-toerana.